बन्दाबन्दीसँगै मल अभावको दोहोरो समस्यामा केरा खेती « Loktantrapost
बन्दाबन्दीसँगै मल अभावको दोहोरो समस्यामा केरा खेती
२८ भाद्र २०७७, आईतवार ११:०७
झापा, २८ भदौ । झापामा व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका किसानहरु बन्दाबन्दीसँगै मल अभावको दोहारो समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले स्थानीय सहकारी संस्थाहरुमार्फत पछिल्लो समय मलको व्यवस्था गरे पनि केरा खेती गर्दै आएका किसानले मल पाएका छैनन् ।
गोडमेल गर्ने अहिलेको सिजनमा रासायनिक मल प्रयोग गर्न नपाउँदा केराका बोट कुहिने र फल नलाग्ने समस्या देखा परिसकेको छ ।
विगत चार बर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा कनकाई नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५ र ६, झापा गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र बाह्रदशी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा १५० विगाह जमिनमा व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आउनुभएका दुर्गामाता कोलाखेती कृषि फार्मका अध्यक्ष लक्ष्मी चिमरियाले मल अभावमा केरा खेती धरासायी भएको बताए ।
‘एकातिर बजारको समस्या अर्कोतिर मलको’, उनले भने, ‘बन्दाबन्दीका कारण लाखौं नोक्सान हुने भयो ।’ उनले केरालाई असारदेखि भदौ महिनासम्ममा गोडमेल गरेर यूरिया, डिपो र पोटासलगायतको मल लगाइसक्नुपर्ने बताए ।
वि.सं. २०७४ सालमा १२ विगाह जमिन लिजमा लिएर सुरु गरिएको केरा खेती विस्तार गरेर अहिले ३४ जना किसानको १५० विगाह जमिनमा छ । मालबोहक, चिनी चप्पा, लालकेरालगायतका जातको खेतीबाट गतबर्ष रु. एक करोड आम्दानी भएको थियो ।
यहाँ उत्पादन गरिएको केरा काठमाडौंका व्यापारीले बोटबाटै गतबर्ष प्रतिकोसा रु. ५ मा विक्री गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘बन्दाबन्दीले काठमाडौंका व्यापारी आउन पाएनन् स्थानीय व्यापारीले प्रतिकोसा रु. ३ भन्दा बढी दिँदैनन् । नाफा त के खर्च पनि नधान्ने अवस्था भयो ।’ बेलैमा गोडमेल गरेर मल हाल्न नसक्दा गाना कुहिएर केराको बोट मर्न थालेको उनको भनाई छ ।
१५० विगाह जमिन मध्येबाट ७० विगाहको केराखेतीले मात्र फल दिइरहेको उनले बताए । बाँकी जमिनमा हुर्किरहेका विरुवा फल नदिँदै मर्न थालेका छन् । उनले हालसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र झापाबाट खेती प्रवर्धनका लागि रु. २७ लाख अनुदान पाएको जानकारी दिए ।
प्रदेश नम्बर १ का कृषि राज्य मन्त्री रामबहादुर राना मगर, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख निलकमल सिंहलगायतले केरा खेतीको अवलोकन गरी मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।